7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talooyin | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » 7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talooyin
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-07-16 3:02 PM Maadaama caalamku is badalay oo habeenkii iyo maalintii isku mid noqdeen xaga dhaqdhaqaaqa waxaa aad u soo baxay dhibaatooyin badan oo la xiriirta hurdo la’aanta ama dhafarka habeenkii taasoo na dareensiineysa ahmiyada hurdada iyo faa’idooyinka caafimaad ay hurdadu wadato.
Dhafarka habeenkii waa wax khilaafsan sunnadii eebe ugu tala galay bini’aadanka, eebe wuxuu quraankiisa ku xusay dhowr meel in habeenkii loogu talagalay daganaan iyo hurdo, maalintiina nolol iyo dhaqdhaqaaqa, qofka bini’aadankane labaduba uusan ka maarmi karin.
Fikrada khaldan ay dadku qaar aaminsan yihin ayaa ah, haduu qofka habeenkii soo jeedo, maalintiina uu hurdo in ay ku filan tahay oo uu faa’idadii hurdada helay.
Hurdadu waxay kobcisaa difaaca jirka waxay awood dheeraad ah iyo firfircooni siisaa unugyada jirkeeda ee eebe ugu tala galay inay ka hortagaan waxyaabaha jeermiska ah, sidaas awgeed dhafarka iyo hurdo la’aanta joogtada ah waxay keentaa in qofka jirkiisu uu iska difaaci kari waayo xanuunada.
Hurdadu waxay yareysaa miisaanka qofka, dhafarkuna wuxuu keenaa cayil, waxay cilmibaarayaashu arkeen in dadka dhafro in ay boqolkiiba 30% ay kaga halis badan yihiin cayilka dadka hurdada helo, taasna waxaa lala xiriiriyay in hurdo yarida ay yareyso maado la yiraahdo “leptin” taasoo qofka dheregta dareensiiso waxuu kaloo dhefarka kordhiyaa maadada loo yaqaano “Gherlin” oo ah hormoonka dareensiiyo gaajada.
Hurdadu waxay kordhisaa caafimaadka iyo dareenka maskaxda, qofka dhafra wuxuu dareemaa subaxii daganaansho la’aan iyo inuu si sahlan ku xanaaqi karo maadaama dareemadiisu ay kacsan yihiin oo habeenkii dhan shaqo ku jireen, hadduu qofka dhafarkaas u barto waxay keentaa niyad jab, diiqo iyo welwel, diraasadl lagu sameeyay dadka laga daaweeyo diiqada in ay badakood helin hurdo ku filan ama ay ku bada ntahay dhafarka.
6- Xanuunada laga dhaxlo khilaafista sunada nolosha ee eebe waxay ku tusinayaa in jirka bini’aadanka loogu talagalay si kontorool leh inuu u noolaado, hadduu caksigeeda uu sameeyane wuxuu ka dhaxlaa dhibaatooyin aadan waqtigaas dareemi karin.